संसारको एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ सन्तान पाउनको लागि लि”ङ्ग चढाइन्छ, यहाँ भा’कल गरेर महिला गर्भवती हुन्छिन् । एकपटक फोटो छोएर दर्शन गरौ! - samachar
Home > धार्मिक > संसारको एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ सन्तान पाउनको लागि लि”ङ्ग चढाइन्छ, यहाँ भा’कल गरेर महिला गर्भवती हुन्छिन् । एकपटक फोटो छोएर दर्शन गरौ!
संसारको एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ सन्तान पाउनको लागि लि”ङ्ग चढाइन्छ, यहाँ भा’कल गरेर महिला गर्भवती हुन्छिन् । एकपटक फोटो छोएर दर्शन गरौ!
samacharpostdainik April 16, 2022 धार्मिक	0
1संसारको एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ सन्तान पाउनको लागि लि”ङ्ग चढाइन्छ, यहाँ भा’कल गरेर महिला गर्भवती हुन्छिन् । एकपटक फोटो छोएर दर्शन गरौ!
संसारको एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ सन्तान पाउनको लागि लि”ङ्ग चढाइन्छ, यहाँ भाकल गरेर महिला गर्भवती हुन्छिन् ।
साथीहरू, संसारमा एउटा यस्तो र’ह’स्य’मय मन्दिर छ जहाँको आस्थाको रहस्य थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ । किनभने त्यहाँ धेरै फरक विश्वासहरू छन्। तर, यस प्रकारको मन्दिर हाम्रो देशमा नभई विदेशमा रहेको छ ।
साथीहरू, मन्दिरहरू नेपालमा मात्रै नभई संसारको हरेक कुनामा अवस्थित छन्। किनभने संसारको हरेक कुनामा हिन्दुहरूको प्रभुत्व छ। तर संसारमा केही यस्ता मन्दिर छन् जहाँ चलन र मान्यता एकदमै फरक छन् ।
संसारमा एउटा यस्तो मन्दिर छ जहाँ विश्वासीहरूका बीचमा फूलको माला वा गहना छैन।
तर यो अनौठो मन्दिरमा पु’रुष लि”ङ्ग चढाइन्छ। यद्यपि यो मन्दिर नेपालमा नभई थाइल्याण्डमा रहेको छ ।
मन्दिरलेलि”ङ्ग चढाएको छ कि छैन?: लि”ङ्ग चढाइने मन्दिर थाइल्याण्डको सियान नदीको किनारमा बैंककमा अवस्थित छ। र बैंककमा रहेको यस मन्दिरको नाम चाओ माई तुतपिम हो।
र यस मन्दिरको विशेषता यो हो कि यहाँका मानिसहरु से; क्समा विश्वास गर्छन् । यहाँ आउने मानिसहरूले धातु, रबर वा काठको लि”ङ्ग पनि चढाउँछन्।
चाओ माईलाई लिं”ग चढाउँदा बाँ’झोपन पनि हट्ने जनविश्वास छ । शो’काकु’लको घरमा सन्तान पनि जन्मिन्छन् । त्यसैले चाओ माई तुतपिमलाई प्र’जनन क्षमताको देवी पनि मानिन्छ।
प्र’जनन सं’भो’गको परिणामको रूपमा हुन्छ। यस मन्दिरको बिशेषता यो हो कि यहाँ सेक्स गर्दा सन्तान प्राप्ति हुने गर्दछ । यो मातालाई अहिलेसम्म हजारौंले स्वीकार गरेका छन्। र धेरैले भनेका छन् कि उनीहरूको घरमा बच्चाहरू छन्।
यहाँ लि”ङ्ग किन चढाइन्छ ? : स्थानीयवासीका अनुसार नाइ लर्ट नामका व्यक्तिले आफ्नो आस्था र आस्थाका आधारमा यो मन्दिर बनाएका हुन् ।
र त्यही अनुसार पवित्र आत्माहरू यहाँ बास गर्छन्। जसले गर्दा मानिसको पी’डा ह’ट्छ । सुगन्धित फूल फुलाउन टाढा टाढाबाट पनि मानिसहरु आउने गर्दछन् । साथै, हरेक वर्ष हजारौं मानिसहरू यहाँ बच्चा जन्माउने विश्वास लिएर आउँछन्।
कसरी सुरु भयो यो चलन ?: स्थानीय महिलालाई सन्तान जन्माउन गा’ह्रो भएको बताइन्छ । र अझै पनि उनको कुनै सन्तान नभएपछि उनले यस स्थानमा काठको लि”ङ्ग चढाए र माताजीमा आस्था राखे। ती महिलाले आफ्नो विश्वास गुमाए र उनी गर्भवती भइन्।
त्यसपछि उनले यो कुरा अन्य महिलाहरूलाई बताइन् र यसरी यो शब्द हजारौं र अहिले संसारका लाखौं मानिसहरूमा पुगेको छ। यहाँ उल्लेखनीय छ कि चाओ माईलाई बौद्ध कालको वृक्षदेवता पनि मानिन्छ।
यद्यपि मानिसहरू बच्चा जन्माउने प्रार्थना लिएर यस मन्दिरमा आउँछन्। एक दाबी अनुसार यहाँका जनता प्रजनन क्षमतामा विश्वास गर्छन् ।
नपढ्नेलाई ठुलो दसा – कहिलै नल्याउनुहोस् यी पाँच कुरा, आउनेछ गरिबी र संकट
यी ५ नित्यकर्म कहिल्यै नछोड्नु ,भलो हुँदैन ,राम्रो हुँदैन : गरुड पुराण :